Mobipocket Creator: ဒီပရိုဂရမ်ကဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ eReaders အားလုံး
Mobipocket Creator ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။
Eder Esteban | | ယေဘုယျ
၎င်းသည်မကြာသေးမီကစျေးကွက်ဖြစ်သော်လည်း၊သူသည် eBooks နှင့် eReaders လုပ်ငန်းများတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောဝေါဟာရများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သိပ်မသိရပေမယ့်သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Mobipocket ကိုယခင်က Mobi ဟုလူသိများခဲ့သည်။
၎င်းသည် eBook ဖိုင်များအတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်အများပြည်သူမသိသော်လည်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် Mobipocket Creator ကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွေဖန်တီးပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့ဆိုရင်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုပြောပြပါမယ်။
ပထမဆုံး Mobi or Mobipocket format နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပါမယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤ Mobipocket Creator အကြောင်း၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ အသေးစိတ်ပြောပါမည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သုံး ဦး စလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များစွာရှိသည်။
1 Mobi / Mobipocket သမိုင်း
2 Mobicpoket Creator ဆိုတာဘာလဲ
3 Mobipocket Creator ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ
4 Mobipocket ကို Kindle တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Mobi / Mobipocket သမိုင်း
ဒီပုံစံ၏သမိုင်းအတော်လေးမကြာသေးမီကဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုတရားဝင်ဈေးကွက်တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပြင်သစ်ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးခဲ့သည် Mobipocket SA။ ၎င်းကို PalmDOC format အတွက် extension အဖြစ်မူလကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် sနှင့် LZ77 algorithm ကိုအသုံးပြု။ အချို့သော HTML data တွေကို tags ကဆက်ပြောသည်။ တကယ်တော့ဒီပုံစံကိုဒီနေ့ဆက်လက်အသုံးပြုနေတဲ့ MOBI စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤချုံ့ခြင်းဆိုင်ရာ algorithm သည်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာစာရွက်စာတမ်းရဲ့အရွယ်အစားကိုလျှော့ချတဲ့ huffman ကုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြကတည်းက။ သို့သော်ဤစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုံစံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်ကတည်းက.
၂၀၀၅ သည်အရေးကြီးသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ အမေဇုံကတည်းက Mobipocket SA ဝယ်ယူခဲ့သည် ထို့ကြောင့်အမေဇုန်သည်ဤပုံစံ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ အဲဒါက DRM algorithm ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ နှင့် KF7 ပုံစံကိုအမေဇုန်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ Amazon Kindle သည် MOBI ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့နိုင်ပြီးဖတ်ရှုနိုင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Amazon သည် Mobipocket ၏ထောက်ခံမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလေထဲတွင်အများကြီးကျန်ရှိနေသောအရာတစ်ခုခု။ နောက်ဆုံး ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိကုမ္ပဏီသည် Mobipocket ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် eBooks ၀ ယ်ချင်တဲ့သူတိုင်းကို Amazon ကနေတစ်ဆင့်သာဝယ်သင့်တယ်။
ဤသို့ပိတ်သိမ်းခဲ့သော်လည်းဤပုံစံသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအထောက်အပံ့ပေးသောစက်ပစ္စည်းအချို့တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤ extension နှင့်အတူဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် Mobipocket Creator ရှိသည်.
Mobicpoket Creator ဆိုတာဘာလဲ
ယခင်ကခန့်မှန်းထားသည်အတိုင်း, Mobipocket Creator သည်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သော software ဖြစ်သည်။ ၎င်းပရိုဂရမ်သည်၎င်း extension ကို အသုံးပြု၍ ဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါဟာဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာများနှင့် Word ဖိုင်ကို Mobi အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါကြောင့် .doc extension နဲ့ဖိုင်တွေကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ Mobi format နဲ့ဖိုင်တွေရနိုင်ပါတယ်။
ဤပရိုဂရမ်သည် Windows ကွန်ပျူတာများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီမှစျေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်သောတစ်ခုတည်းသော software မဟုတ်သော်လည်း အမေဇုံက Amazon KindleGen လို့ခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကတည်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကတည်းကသင်တို့ထဲကတချို့ဟာအကျွမ်းတဝင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
အဘယျသို့ကြောင့် ဒုတိယအစီအစဉ်မှာ ePub တစ်ခုသို့မဟုတ် OPF မှ MOBI တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Windows, Linux နှင့် Mac တို့အတွက်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများအားလုံးက၎င်းကို အသုံးပြု၍ ရရှိနိုင်သည့်ပရိုဂရမ်နှစ်ခုနှင့်အတူ Mobi ဖိုင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
Mobipocket Creator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် eBook ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်သည်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ် HTML ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်စာအုပ်ထားရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းသည်အခမဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများမှစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပေးသည်။ ၎င်းတွင်သင့်အားအလွန်ရိုးရှင်းသောအရာအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဒီအယ်ဒီတာရဲ့အားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုက အသုံးပြုသူများကို eBooks များကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဖိုင်များကို MOBI format ဖြင့်သာဖန်တီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အလွန်စွယ်စုံရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ eBook ကိုအသုံးပြုလိုသည့်ကိရိယာပေါ် မူတည်၍ ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ eReader ဒါမှမဟုတ် tablet ဒါမှမဟုတ် smartphone အတွက်ကွဲပြားခြားနားဖို့လိုတာပေါ့။
Mobipocket Creator ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ
Mobipocket Creator တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိခဲ့သည် ဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်တဲ့နေရာ။ ပရိုဂရမ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအချိန်မရွေးရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အမေဇုံကရပ်တန့်သွားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကဒီစီမံကိန်းကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီအယ်ဒီတာနေဆဲရရှိနိုင်ပေမယ့်။
သော်လည်း ၎င်းသည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမရနိုင်ပါ။ Softonic ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များကိုကူးယူရန်အခြားဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည်။ ဤ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများတွင် Mobipocket Creator ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ပရိုဂရမ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစာရွက်စာတမ်း၏ format ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ကသုံးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Mobi format နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော eReader တစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ပရိုဂရမ်ကို သုံး၍ ဤဖိုင်ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီပရိုဂရမ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ကိုဖန်တီးပါ၊ အဲဒါကိုအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူယူသွားပါ။
ထိုကွောငျ့, ဤပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရန်လိုအပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောယုံကြည်စိတ်ချရသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာထဲသို့မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမျှမလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် download options များစွာရှိသည်။ ဒါပေမဲ့မင်းလိုချင်ရင် သငျသညျ Mobipocket Creator ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီကနေ က်ဘ်ဆိုက်.
Mobipocket ကို Kindle တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Amazon ၏ Mobipocket ဝယ်ယူမှုသည်ထိုစဉ်ကကုမ္ပဏီလုပ်ဆောင်နေသည့် eReaders တွင်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြီးတယ် စျေးကွက်ထဲမှ Amazon Kindle ၂၀၁၁ မတိုင်မီကစာရွက်စာတမ်းများကို Mobi format ဖြင့်ဖတ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ unencrypted နေကြသည်အဖြစ်။ သူတို့ကဖတ်နိုင်ပြီးဇာတိထောက်ခံမှုရနိုင်တယ်။
၂၀၁၁ မှစတင်ခဲ့သည့်မော်ဒယ်များသည်ပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော Kindle Format 2011 ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီတော့ဒီမော်ဒယ်များလိုက်ဖက်တဲ့ရှိသည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်မည်သည့် eBook အမျိုးအစားကိုမူလကထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ တစ် ဦး ကတည်းကAZW ရှိသူများသည် Mobi စာရွက်စာတမ်းကိုဖတ်နိုင်လိမ့်မည် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး ရှိသည်သောသူတို့အား AZW3နှင့်အတူ Kindle.
သို့သော် KF8 ၏အစကိုအမှတ်အသားပြုသည့်နောက်ပိုင်းတွင်မူဤဖိုင်တွဲများနှင့်ဖတ်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်ပံ့ပိုးမှုမရရှိနိုင်ပါ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, Mobi ဟာလက်တွေ့ကျကျပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့မော်ဒယ်များနှင့်အသုံးပြုသူများနေဆဲရှိပါတယ်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာ၎င်းသည်နာရီပေါင်းများစွာရှိပြီးဖြစ်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မကြာခင်မှာပဲသူကသုံးစွဲဖို့ရှိလိမ့်မည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်ယုတ္တိရှိသော်လည်း၎င်းသည်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » Mobipocket Creator ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။